Vicente Blasco Ibáñez ari kupemberera zuva rake rekuzvarwa. Mamwe mitsara yemabasa ake | Zvazvino Zvinyorwa
Vicente Blasco Ibáñez ari kupemberera zuva rake rekuzvarwa. Mamwe mitsara kubva kumabasa ake
Mufananidzo weBlasco Ibáñez. Antoni Kuzadza i Granell (1900).
Don Vicente Blasco Ibáñez ariko nhasi pazuva rake rekuzvarwa. Nezuro chaiye chaive chiitiko chegumi nemana chekufa kwake, asi pasina kupokana zvinogara zviri nani kupemberera kuzvarwa. Saka nhasi ndarangarira munyori wechiValencian ane tarisa basa rake uye a kusarudzwa kwemamwe mitsara iyo yatinowana mairi.
2 Mamwe mitsara kubva kumabasa ake
2.2 Tsanga nematope
2.3 Vatasvi vana vemabhiza eApocalypse
2.4 Miti yeOrange
2.5 Ivo argonauts
Ndiye mumwe wevanyori inonyanya kufarirwa kubva kunonoka XNUMXth uye kutanga kwema XNUMXth century. Basa rake rinogona kunzi nderake zvakasikwa, asi zvakare ine zvinhu asluki.
Akadzidza zvemutemo, asi basa rake rakakurumidza kutendeukira kuna kunyora nezvematongerwo enyika. Aive mutsigiri uye mudziviriri weiyo republic uye aive muCongress of Deputies kaviri. Iye anga asiri wechero bhuku rekunyora, asi akagadzira yazvino inonzi blasquism icho chaive chikonzero chekutapwa kwake munyika dzakaita seItari kana France.
Rakawanda rebasa rake rinoratidza zvakakwana iyo Valencian nzanga yenguva Chemhondoro Bharaki o Tsanga nematope, asi kubudirira kukuru padanho repasi rose kwakauya ne Vatasvi vana vemabhiza eApocalypse. Raive basa raitengeswa pasirese pasirese uye rikaitwa mufirimu kaviri.
Mukuwedzera kune Vatasvi vana vemabhiza eApocalypse, mamwe mabasa akaendeswa kubhaisikopo Chemhondoro Ropa neJecha, Mare Nostrum, Rukova o Pakati pemiti yemaranjisiuye zvakare Vakafa vanofamba y Akashama maja. Uye zvechokwadi isu tinofanirwa kuratidza iyo kuchinjika kweterevhizheni kwe Bharaki o Tsanga neMadhaka muma70s uye, munguva pfupi yapfuura, Pakati pemiti yemaranjisi o Mupunga uye tartana.
Mamwe mitsara kubva kumabasa ake
Vakanga vari voga kupfuura pakati perenje; kushaya ruvengo kwakaipisisa kakapetwa churu pane iyo yaakasikwa.
Kamuri iri, rakasviba uye rakanyorova, rakapa mweya wehwahwa, pefiyumu yekufanirwa, iyo yakadhakisa mhino nekukanganisa maziso, ichiita kuti munhu afunge kuti pasi rese raizofukidzwa nemafashama ewaini.
Sezvaakawanawo muhofisi yake, varombo huertana vakashinga vakapinda munzira dzakasviba, idzo dzaiita sedzakafa panguva iyoyo. Nguva dzose, paakapinda, akanzwa kumwe kusagadzikana, iko kusemburwa nedumbu rakapfava. Asi mweya wake wemukadzi akatendeseka uye anorwara aiziva kukunda pfungwa iyi, uye akaramba achienderera nekuzvikudza kusina maturo, nekudada kwemukadzi akachena, akazvinyaradza kuti aone kuti iye, asina simba uye akaremerwa nenhamo, achiri pamusoro kune vamwe.
Yakanamatira munda wemichero munguva yorubvunzavaeni. Nechekumashure, pamusoro pemakomo erima, makore aive akapendwa nekupenya kwemoto uri kure; padivi pegungwa nyeredzi dzekutanga dzakadedera mukusingaperi; imbwa dzakahukura zvinosiririsa; nerwiyo rusingafadzi rwematatya nemakiriketi kuchema kwemotokari dzisingaonekwe kwakavhiringidzika, kufamba munzira dzese dzebani rakakura.
Sango raiita kunge rinodzokera rakananga kugungwa, richisiya pakati paro neAlfufera bani rakadzika rakazara rakafukidzwa nehuswa hwesango, rakabvarurwa dzimwe nguva nejira rakatsetseka remadhamu madiki.
Vatasvi vana vemabhiza eApocalypse
Iko murume anoita hupfumi hwake nekuumba mhuri yake, ndipo pane nyika yake yechokwadi.
Hooray yerunyararo, Frenchy, uye nehupenyu hwakareruka! Kana murume achigona kurarama zvakanaka uye asiri munjodzi yekuuraiwa nezvinhu zvaasinganzwisise, kune nyika yake chaiyo!
Miti yemaranjisi, yakafukidzwa kubva padanda kusvika kumusoro mumaruva machena nekupinza kwenyanga dzenzou, yaitaridzika kunge yakakoswa miti yegirazi.
Mwari wangu haandizive, haazive munhu. Haaoni uye matsi kuvanhu, semasimba ezvisikwa.
Vakaropafadzwa vanhu vasingafungi! Kwavo kuchave kudzikama uye hunhu hunosemesa!
Paunofamba, unosiya maguta, kunyangwe zvichinakidza sei, uine kunzwa kwemufaro. Chido chakamutswa, hunhu hwemadzitateguru hweshanduko nekufamba, hwatinotakura matiri senhaka kubva kuna sekuru naambuya vedu vari kure, vasina simba vanongofamba-famba venyika yepamberi. Chii chakatimirira mudanho rinotevera?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Vicente Blasco Ibáñez ari kupemberera zuva rake rekuzvarwa. Mamwe mitsara kubva kumabasa ake
Donna Leon, Mambokadzi Wematsotsi, anochema achida rubatsiro akamirira nyika